Kursiga Beeraha, Warshadaha Kursiga, cagaf Kursiga - TFS
Pictures of warshadaha
TFS, Muujinaysaa koox ka mid ah warshadaha ee Shiinaha, oo ay ku jiraan kursiga & qaybo ka qayb saarayaasha, soo saarta line ballaaran oo kursi ku habboon oo dhan cayn kasta oo Motor Vehicle, oo ay ku jiraan Cagaf, Beeraha, dhismaha, warshadaha, Lawn & Garden, Turf Professional, iyo qalabka Utility codsiyada. line kursiga waxaa ku jira noocyo badan oo kursi caanka ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah naqshado kursiga casri ah u saftay iyo sifooyinka gaarka ah
A koox farsamo oo xoog shaqeeyay muddo 20 sano ah ee taariikhda soo saarka kursiga, samaynta design ugu dambeeyay kursiga oo isku mar si joogto ah si ay u ballaadhiyo awoodda wax soo saarka. Maanta saddex nooc oo line-soo-saarka, waayo xumbaynayso, gaar ahaan ka muuqataa kala jejebintii technology iyada oo la dhar doorsoon taageeray vinylalkohol oo waxaa laga dalbadaa kuraasta fasalka sare. line-soo-saarka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah processing dhamaystiran kuraasta, sida, machining, jediyay, iyo sidoo kale alxanka, rinjiyaynta, shirka. Marka laga reebo kor ku xusan, tooling la sameeyo nafteena by, oo ay ku jiraan Gurdanka, caag & xumbo wasakhahaasi waaweyn.
badeecada dhoofin Maraykanka, Japan iyo dalalka kale, ee shirkadaha qalabka mashiinada guryaha waaweyn beeraha shaqo waqti isku mid ah.
kuraasta Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa in beeraha, dhismaha, warshadaha, cawska & beerta, dambeeyay dhaqan design in, raaxo, ammaanka iyo Riiqdeediina maalin kasta xadgudub fiican-raadinta iyo xaaladaha deegaanka adag.
Our warshad waxaa shahaado ISO9001 heerarka, iyo shahaadada CE, si loo hubiyo in kuraasta our ilaaliyaan tayada joogto ah uu dalbaday by OEMs.
Baarista shaybaarka kulmi kartaa imtixaanka kuraasta, oo ay ku jirto xoog, inuu dillaaco, buufiyo cusbo, UV, ololi, abrasion, durometer jirrabaya, iwm
Haddii aad raadinayso lagu kalsoonaan karo oo tayo-qeybiyaha, ama xiiseynaya mid ka mid ah waxyaabaha our, fadlan kala xidhiidh kooxdayada si ay u daboolaan baahida.
Top Factory qeybiye
10 Oct. 2019 New CNC ay gacanta ku mishiinka axdi qarameedka, waayo, wax taaj oo kale ah soo gala our workshop.CNC ayaa si weyn u soo hagaagtay awoodda horumarinta wax soo saarka iyo xawaaraha horumarka, si ay u caawiyaan horumarinta shirkadaha 02 Nov. 2019 T ...
VIP Rakaabka Kursiga , Rear Kursiga , Slide Kursiga Universal Rail , Anti-simbiriirixan Gun ujeedadu Kursiga , -laabanto Kursiga , Hardware Torsion Birta Wire Clamps ,